'रोगले भन्दा भोकले बढी सताउन थालेकाे छ'
ओली–दाहाल बीच तीन घण्टा लामो छलफल
कोभिड-१९ विहीबार, जेठ २९, २०७७
''हामी सरकारको नियम पालना गरेर घरभित्र बसिरहेका छाैं भने सरकार पनि हामीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।”
“म आनिक राना मगर तेस्रोलिंगी महिला हुँ । म बुटवलमा बस्छु । नीलहिरा समाजसँग आवद्ध भएर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको लागि काम गर्छु ।
लकडाउनपछिको मेरो दैनिकी फेरिएको छ । अहिले घरभित्रै बसेर अनलाइनबाट साथीहरूसँग दैनिक बैठक बस्ने, छलफल गर्ने र योजना बनाएर काम गर्दैछु । म घरैबाट रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु तीनवटै जिल्लाका साथीहरूसँग समन्वय गरी काम गरिरहेकी छु । सेवामा पहुँच नभएका साथीहरूको पहिचान गर्दै उहाँहरूलाई सहयोग गर्नु मेरो अहिलेको प्राथमिकता हो ।
समस्या त मेरा आफ्नै पनि छन् तर म आफैं अधिकारकर्मी भएर हिंडेकी मान्छे मैले नै समस्या देखाउँदा अरू साथीहरूलाई कसले सहयोग गर्छ ? भन्ने प्रश्न म आफैंभित्र उब्जिन्छ अनि म फेरि काममा फर्किन्छु ।
कोभिड–१९ ले उग्ररूप लिन थालेको यो समयमा रोजगारी भएका साथीहरूको पनि साथमा पैसा सकिएको छ । अन्य पेशा–व्यवसाय गर्ने साथीहरू पनि लकडाउनले गर्दा पेशाबाटै वञ्चित हुनुभएको छ । रोगले भन्दा भोकले बढी सताउने अवस्था आएको छ । हरेक दिन मलाई साथीहरूले फोन गरेर ‘हामी भोकै मर्ने हो कि केही गर्ने ?’ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ । हाम्रो लागि केही पहल गरिदिनुपर्‍यो भनिरहनुहुन्छ ।
मैले तीनवटै जिल्लाका स्थानीय समाजसेवी र वडा कार्यालयसँग राहतको लागि समन्वय गरिरहेकी छु । सिद्धार्थ नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र बुटवल उप–महानगरपालिकाको ५ र १० नम्बर वडा कार्यालयले तेस्रोलिंगी समुदायका आठ जनालाई राहत उपलब्ध गराएको छ ।
हामीले स्थानीय समाजसेवीको सहयोगमा हाम्रो समुदायका ६० जना साथीलाई राहत उपलब्ध गराएका छौं । यो एकदमै राम्रो प्रयास हो । तर यो पर्याप्त छैन । स्थानीय समाजसेवी र चन्दादाताहरूले भने हामीलाई मास्क, स्यानिटाइजर र खाद्यान्न लगायत अन्य के कुराले सहयोग गर्न सक्छौं ? भनेर चासो देखाउनुभएको छ । यो हाम्रो लागि धेरै नै खुशीको कुरा हो ।
अहिले स्थानीय सरकारले टोल विकास समिति मार्फत राहत वितरण गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ । टोल विकास समिति भनेको को हो ? यसमा को को सदस्य छन् भन्ने प्रश्न हामीसँग छ । टोल विकास समितिले टोल–टोलमा समस्यामा परेका व्यक्तिलाई खोज्ने हो कि हामी आफैं टोल विकास समिति खोज्दै जाने हो ? त्यो पनि हामीलाई सूचना छैन । यस्तो महामारीको समयमा हामीसँग सोधिनुपर्छ । हामी सरकारको नियम पालना गरेर घरभित्र बसिरहेका छां‌ भने सरकार पनि हामीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।”
‘शल्यक्रियाका लागि रगत अभाव हुन थालेको छ’
'महिलालाई क्वारेन्टिनमा राखेर काम लगाउँदा ठग्छन् भन्नेहरुकाे कमी थिएन'
‘स्वास्थ्यसम्बन्धी प्राविधिक कुरामा हाम्रो देश धेरै पछाडि छ’
अहिले संसार नै कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण आइपरेको महाविपत्तिमा छ । संसारभर यसबाट संक्रमित र ज्यान गुमाउनेको संख्या चार लाख नाघसकेकाे छ। संक्रमण बिस्तारलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि हामीकहाँ पनि सरकारले बन्दाबन्दी गरेको छ। जो अहिले तेस्रो महिनामा छ।
विपद् सबैका लागि उस्तै हो। तर यस्ता खाले विपद् र महामारीको ठूलो र गम्भीर असर सिमान्तकृत समुदयमा ज्यादा पर्छ। हाम्रो देशमा महिला, विपन्न वर्ग, सिमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्तिहरु, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुका साथै भौगोलिक रुपमा विकट ठाउँमा बसोवास गर्नेहरुमाथि यो महामारीको असर धेरै परिरहेको छ। यस महामारीले उनीहरुमाथि पारिरहेको प्रभावसँग जोडिएका कथाहरुलाई बाहिर ल्याउने कोशिश हो, कथा कोरोना। २६ चैतदेखि कथा कोरोना टीमले आफ्नो फेसबुक पेज https://www.facebook.com/pg/KathaCoronaNepal मार्फत सार्वजनिक गरिरहेको यो प्रयासमा हिमालखबर पनि जोडिएको छ।
मान्छेको भोगाइ आफैमा सबैभन्दा बलियो साहित्य पनि हो। भोगाइहरुलाई बुन्दै जाँदा तिनीहरु कथा बन्छन्। एक अर्काको कथाले नै हामीलाई जोड्छन् । ती कथाहरुले हामीमा आँट र साहस भर्छन्। अनि हाम्रा कथाहरुले नै हामीलाई यो विपद्को बेलामा एकबद्ध हुन सहयोग गर्छन्। यी र यस्तै विश्वासमा बनेको, कथा कोरोना तपाईलाई पनि मनपर्ने अपेक्षामा यो स्तम्भ पेश गरेका छाैं।
बुधबार, असार ३१, २०७७ ओली–दाहाल बीच तीन घण्टा लामो छलफल